ALATSINAINY 24 FEBROARY 2020
ADY AMIN’NY PESTA : Firenena 24 miara-mikaondoha etsy amin’ny Carlton
Tanterahina etsy amin’ny Hotely Carlton Anosy, nanomboka omaly ary haharitra telo andro ny fikaonan-doha faha13 iarahan’ny « Institut Pasteur de Madagascar » sy ny minisiteran’ny fahasalamam-bahoaka ary ny fikambanambe iraisam-pirenena misahana ny fahasalamana. 17 septembre 2019
Tanjona tratrarina amin’ity fikaonan-doha ity ny hamoahana voka-pikarohana entina miady amin’ny valan’aretina Pesta. Solontenan’ny firenena 24 maneran-tany no mandray anjara amin’izany. Noresahana nandritra ny fihaonana voalohany omaly ny zava-misy ankehitriny, ny fisehon’ny aretina pesta eto Madagasikara sy ny fisehony any ivelany. Nodinihina ihany koa ny fomba hahafahana mitily sy miady amin’ny pesta ary nohalalinina manokana ny fivoaran’ilay otrik’aretina fototry Pesta.
Araka ny nambaran’ny tompon’andraikitra, nosafidiana manokana tamin’ny fampiantranona ity hetsika ity i Madagasikara, noho ny ezaka nataon’ny minisiteran’ny fahasalam-bahoaka tamin’ny ady amin’ny pesta. Tamin’ny ankapobeny, samy niaiky avokoa ny solon-tenan’ireo firenena 24 nandray anjara tamin’ity atrikasa ity fa nahavita dingana goavana i Madagasikara nahafehy ireny valan’aretina pesta efa niely patrana teto amintsika ireny. « Areti-mandoza, mila fahamailoana sy fandraisan’andraikitra haingana dia haingana ny pesta ka matoa izany voafehy dia nisy ny ezaka goavana nataon’ny tompon’andraikitra », hoy ny solon-tenan’ny firenena nandray anjara.
Nambaran’ny Profesora Rakotomanga ihany koa fa « ny fiadiana amin’ny aretina pesta dia mifototra betsaka amin’ny fiarahamonina ». Avy any amin’ny fiarahamonina, hoy ity farany no miakatra ny vaovao momba ny pesta ary miankina amin’izay no hahafahan’ny minisiteran’ny fahasalamam-bahoaka fepetra. Notsindrian’ity profesora ity ihany koa fa tsy tokony havela hitobaka ny aretina vao mandray fepetra satria aretina saro-pady ny pesta noho izy afaka mifindra na dia amin’ny alalan’ny rivotra fotsiny aza.
Banner lehibe Gauche 200px × 200px (68195) 24 février 2020 Banner faharoa 500px x 70px (638) 24 février 2020 Zazavavy 15 taona niteraka tsy fidiny tamin-drainy niteraka azy FANOLANAN-JANAKA (337) 21 février 2020 Niatrika famotorana savaranonando omaly maraina NY RADO RAFALIMANANA (227) 19 février 2020 Nidina ifotony nijery ny fanamboarana ny Kianja Barea ny Filoham-pirenena FANATANTERAHANA NY VELIRANO (215) 18 février 2020 Zandary iray nitifitra nahafaty ny Raibeny, nitifi-tena koa izy ka maty AMBALAVAO (194) 18 février 2020